Ny angovo an'i Google any Chile dia ampiasain'ny angovo avy amin'ny masoandro | Vaovao momba ny gadget
Iray amin'ireo orinasa lehibe mampiseho ny fahalianany amin'ny angovo azo havaozina ary ambonin'izany rehetra izany satria tsy nandray anjara tamin'ny fampiakarana ny mari-pana amin'ny tany, tsy ny famoahana sy ny asa soratra ihany, fa ny fiasa koa. Google. Porofo iray mazava be amin'ny zava-drehetra izay lasa fa any amin'ny fotodrafitrasa vaovao vao natokan'ny orinasa tao Quilicura (Chile). Miresaka momba ny biraon'izy ireo izahay sy datacenter vaovao izay ny fanjifana herinaratra dia avy amin'ny ny angovo azo avy amin'ny masoandro.
Raha ny voalazan'ny orinasa tenany sy ireo tompon'andraikitra amin'ny tetikasa titanic dia toa azo natao izany noho ny fifanarahana noraisin'ilay orinasa Espaniôla ihany Angovo Acciona ka ny orinasa amerikana dia afaka mampiasa angovo 80 MW nalaina an-tsokosoko avy amin'ny fotodrafitrasa El Romero fotovoltaic, izay hita marina ao amin'ny tany efitra Atacama, 645 km avaratry Santiago.
Ny biraon'i Google sy ny datacenter-ny ao Chile dia tsy mampiasa afa-tsy angovo avy amin'ny masoandro hiasa.
Ity fotodrafitrasa goavambe ity dia afaka mamokatra angovo azo havaozina hatramin'ny 93 GWh avy amin'ny masoandro isan-taona, izany dia mitahiry tahiry famoahana 474.000 2 taonina CO1,5. Mba hahazoana io angovo herinaratra goavambe io dia takelaka manodidina ny XNUMX tapitrisa metatra toradroa no ilaina, ka mahatonga ity zavamaniry photovoltaic ity ho lehibe indrindra amin'ny karazany any Amerika Latina rehetra.
Tsy misy isalasalana, dingana vaovao iray izay mampiseho ny fanoloran-tenan'i Google amin'ity karazana hetsika ity, na dia, araka ny filazan'ny orinasa aza, dia tsy hijanona amin'ity hetsika ity fa, Amin'ny faran'ity taona 2017 ity dia tadiavin'izy ireo fa tsy misy famoahana gazy karbonika 100% akory ny asany rehetra. Araka ny fanambarana navoakan'ny Google tenany:
Lazain'ny siansa amintsika fa ny ady amin'ny fiovan'ny toetrandro no laharam-pahamehana manerantany. Mino izahay fa ny sehatra tsy miankina, miaraka amin'ny mpitarika politika, dia tsy maintsy mandray andraikitra feno fahasahiana ary afaka manao izany amin'ny fomba mahomby amin'ny fitomboana sy ny taranaka manararaotra isika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » General » About us » Ny angovo an'i Google any Chile dia ampiasain'ny angovo avy amin'ny masoandro
Instagram ihany koa dia hanolotra doka amin'ny horonantsary ao